भोलि कार्तिक ३० गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि कार्तिक ३० गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल!
भोलि कार्तिक ३० गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल!
admin November 15, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 301 Views
तपाईको दिन धेरै फलदायी रहनेछ। तपाई अस्वस्थता अनुभव गर्नुहुनेछ । शरीरमा थकान र आलस्य अनुभूति हुनेछ। तपाई यसदिन क्रोधित हुदा कार्य बिग्रिन सक्नेछ।
यसदिन सावधानीपुर्वक बिताउनुहोस्। यसदिन कुनै पनि नया कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस। खानपानमा विशेष ध्यान राख्नुहोस। शारीरिक रूपबाट थकानको अनुभव हुनेछ।
तपाईको यसदिन रमाईलोमा बित्नेछ । नया कपडा किन्ने अवसर मिल्नेछ। प्रणयको लागि राम्रो दिन रहेको छ । मिठो भोजनको योग रहेको छ। सामाजिक सम्मान र ख्याति मिल्नेछ । उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हुनेछ।
यसदिन तपाइको घरमा शान्ति तथा आनन्दको वातावरण रहनेछ। साथै सुखमय प्रसंग बन्नेछ। तपाई जुनसुकै कार्य गर्नुहुन्छ त्यसमा सफलता पाउनुहुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ।
तपाइको यसदिन आनन्दले बित्नेछ। तपाई अझ कल्पनाशील बन्नुहुनेछ। प्रिय मित्रको साथ भएको भेट शुभ हुनेछ। सन्तानको प्रगतिको समाचार मिल्नेछ। साथीहरुसंग भेटघाट हुनेछ।
तपाइको यसदिन शुभ रहनेछ। थुप्रै समस्याले मनमा चिन्ता हुनेछ। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थ रहनेछ। स्फूर्तिको अभाव हुनेछ । आफन्तहरुसंग मतभेद हुनेछ। माताको स्वास्थ्यको चिन्ताले सताउनेछ। धन असुरक्षित हुनेछ।
यसदिन तपाइको शुभ फलदायी रहनेछ। दाजुभाईसंग राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। कुनै धार्मिक स्थल जानुहुनेछ। धन लाभ हुनेछ। विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ। नया कार्य सुरुवातको लागि शुभ दिन रहेको छ। शारीरिक र मानसिक रुपबाट स्वस्थ रहनेछ।
बृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio
यसदिन तपाईलाई साधारण लाभ हुनेछ। व्यर्थको खर्च गर्न कम गर्नुहोस। परिवारमा झगडा हुन सक्नेछ। शारीरिक समस्याको साथै मनमा ग्लानी हुनेछ। नकारात्मक मानसिकता नराख्नुहोस।
तपाईआफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थ्यको ध्यान राख्नुहोस। यसदिन तपाई निर्धारित कार्य गर्नसक्नुहुनेछ। आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेछ। दाम्पत्यजीवनमा सुख र आनन्द मिल्नेछ।
यसदिन सावधानीपूर्वक बिताउनुहोस्। व्यावसायिक कार्यमा सहकारी हस्तक्षेप बढ्नेछ। खर्च सामान्य भन्दा बढी हुनेछ। धार्मिक, सामाजिक कार्यमा व्यस्तता बढ्नेछ ।
नया कार्य सुरु गर्नको लागि यसदिन शुभ रहेको छ। जागिर तथा व्यापारमा लाभ हुने सम्भावना छ। महिला साथीहरूबाट काम पाउन सकिनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा तपाईको ख्याति बढ्नेछ।
यसदिन तपाइको शुभ फलदायी हुनेछ । सफलता र उच्च अधिकारीहरूको आशिर्वादले तपाईको दिन प्रसन्नताले भरिपूर्ण हुनेछ । व्यापारीको व्यापारमा वृद्धि तथा सफलता मिल्नेछ। पिता तथा ठुला मानिसबाट लाभ हुनेछ। साथै पदोन्नति हुनेछ।
Previous विप्लवको नेपाल बन्दः बारको आन्दोलनमा जाने वकिललाई नरोक्ने
Next नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडाै‌सहित देशभर मसाल जुलुस, कहाँ के भयो ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा